လိင် ကြက်ခြေနီအသင်း 3901 views
ဂျနီဗာ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅
“ဒီအပြုအမူဟာ ကျွန်တော်တို့ ဝန်ဆောင်ပေးရမယ့် ပြည်သူတွေနဲ့ ရပ်ရွာအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ် သစ္စာဖောက်တာပါပဲ။ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ဆန့်ကျင်ရာကျပါတယ်။ ဒီကိစ္စကာကွယ်ဖို့အတွက် ဒီထက်ပိုပြီး အလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်”ဟု ဒါကော့က ပြောကြားခဲ့သည်။
အခြားသော ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၌ အကူအညီပေးရေး ဝန်ထမ်းများ၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားနှောင့်ယှက်မှုများ၊ အမြတ်ထုတ်မှုများကြောင့် အရှက်ရစရာဖြစ်နေရချိန်တွင် ICRC ကလည်း ၎င်းတို့၏ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံကို ထုတ်ပြန်ရှင်းလင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဟေတီနိုင်ငံတွင် Oxfam Great Britain အဖွဲ့ ဝန်ထမ်းအချို့၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲလုပ်မှုသတင်းများ ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများကို ဟေတီတာဝန်ရှိသူများက ရပ်ဆိုင်းပစ်ခဲ့သည်။ Save the Children အဖွဲ့ကလည်း အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဟောင်း၏ အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းများအပေါ် မသင့်လျော်သည့် အပြုအမူများအတွက် တောင်းပန်ကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ICRC ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒါကော့ဗ်က ဝန်ထမ်းများသည် စာချုပ်အရ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုကို ငွေဖြင့်ဝယ်ယူခြင်းအား ပိတ်ပင်ထားသော ICRC ၏ ကျင့်ဝတ်နီတိကို လိုက်နာရန်လိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“၂၀၀၆ ခုနှစ်ကစပြီး ဒီပိတ်ပင်မှုဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ အချိန်တိုင်း အကျုံးဝင်ပါတယ်။ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း တရားဝင်တဲ့နေရာတွေမှာတောင် အကျုံးဝင်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းက လိင်ကိစ္စအတွက် ပိုက်ဆံပေးပျော်ပါးနေတယ်ဆိုတာဟာ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ တန်ဖိုးထားမှုတွေ၊ ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ သဟဇာတမဖြစ်တဲ့ ကိစ္စလို့ ICRC က ယုံကြည်ထားပါတယ်”ဟု ဒါကော့က ပြောကြားခဲ့သည်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ဝန်ထမ်း ၁၇၀၀၀ ကျော်ရှိသော ICRC က သတင်းမပို့သော ဖြစ်စဉ်များ သို့မဟုတ် မှန်ကန်စွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းမရှိသော ဖြစ်စဉ်များလည်း ရှိနိုင်သည်ဟု ပူပန်လျက်ရှိသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေး အဖွဲ့အစည်းများတွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခေါင်းပုံဖြတ်မှု၊ အလွဲလုပ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ယခုအပတ်အတွင်း ဗြိတိန်လွှတ်တော်အမတ်များက ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ Oxfam အရှုပ်တော်ပုံနှင့် ပတ်သက်ပြီး အထူးအစည်းအဝေး ကျင်းပခဲ့သည်။
အကြီးတန်းအရာရှိများက ပြည့်တန်ဆာများကို အသုံးပြုခဲ့သော Oxfam ၏ ဟေတီရုံးကိစ္စကဲ့သို့သော အရှုပ်တော်ပုံများသည် တစ်ကြိမ်သာဖြစ်သောကိစ္စမျိုး မဟုတ်နိုင်ကြောင်း Save the Children အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ကီဗင်ဝတ်ကင်စ်က သုံးသပ်ခဲ့သည်။
“ဒါက ရှားရှားပါပါး ပန်းသီးပုပ်တစ်လုံး (ငါးခုံးမတစ်ကောင်) ကြောင့် ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကဏ္ဍတစ်ခုလုံး ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ပြဿနာပါ။ ဒါက တကယ့်ပြဿနာပါ။ စနစ်တကျဖြစ်နေတဲ့ အကြီးစားပြဿနာကြီးပါ၊ ကျွန်တော်တို့ ပြုပြင်ဖို့လိုပါတယ်”ဟု ဝက်ကင်စ်က ဗြိတိန်အောက်လွှတ်တော်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ ကြားနာမှုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အခြားသော အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့အစည်းများသည်လည်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲလုပ်မှုဖြင့် စွပ်စွဲခံရသော ဝန်ထမ်းများကို ထုတ်ပယ်ခြင်း၊ အရေးယူခြင်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
ယင်းအထဲတွင် Norwegian Refugee Council? World Vision? Doctors Without Borders နှင့် Mercy Corps တို့လည်း ပါဝင်သည်။
ကုလသမဂ္ဂသည်လည်း ယင်းပြဿနာမျိုးနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခေါင်းပုံဖြတ်မှု၊ အလွဲလုပ်မှု စွဲချက်ပေါင်း ၁၄၅ ခု လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး ယင်းတို့အနက်မှ ၈၀ မှာ ယူနီဖောင်းဝတ် ငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းမှု တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျန် ၆၅ မှုမှာ အရပ်သားဝန်ထမ်းများနှင့် ပတ်သက်နေသည်။